CryptoKittie, CryptoKitties, download, downloads, free, game, egwuregwu, Egwuregwu, Kryptokťátka, download, download, free
Ihe egwu ohuru CryptoKitties na-enwe ọganihu a na-enwetụbeghị ụdị ya, nke a sụgharịrị dị ka CryptoKitty. Ebubere aha a n'ime ụwa nke Intanet naanị n'izu ikpeazụ na Tuesday, ma otu izu ga - enweta ihe ruru nde $ 3, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65 nke ọtụtụ nde okpueze.
Ọ bụ egwuregwu dị oke mkpa. Onye ọrụ ahụ na-azụta otu pusi gọọmenti ma hụ otú o si etolite.
A na - achọta aha ahụ "crypt" n'aha ahụ n'ihi na ọ nwere ike ịme ngwa ngwa ịmepụta egwuregwu maka mkpụrụ ego cyber - n'azụ cryptome ethereum. Nke a bụ ihe ọzọ na-ewu ewu nke bitcoins, ebe mkpụrụ ego euro na-agbanwe maka ezigbo ego.
Gụkwuo banyere igwu egwu GamesChat.online